युरोपको लगानी भित्र्याउनुपर्छ-डा. शेखर कोइराला - BP Bichar
Home/विचार/युरोपको लगानी भित्र्याउनुपर्छ-डा. शेखर कोइराला
युरोपको लगानी भित्र्याउनुपर्छ-डा. शेखर कोइराला
BP BicharAugust 5, 2019
युरोपेली मुलुकहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध पुरानो र गाढा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको बेलायत यात्रा चाखलाग्दो विषयका रूपमा पढ्दै हुर्केका हामीले त्योभन्दा पछि पनि युरोपेली नेताको लगातारको नेपाल भ्रमण, नेपालको आर्थिक—सामाजिक विकासमा पूरै युरोपको सहयोग र सद्भाव अनि हालका दिनमा युरोपेली युनियनले नेपालको विकासमा गरेको योगदानप्रति उच्च सम्मान गर्नुपर्छ।
नेपालको पहिलो आधिकारिक माइग्रेसनको इतिहास पनि युरोपबाटै सुरु हुन्छ। सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिअघि सन् १८१४ देखि नेपाल र बेलायतबीच लडाइँ भयो। युद्ध समाप्तिकै समयमा नेपालका करिब ४६५० युवा बेलायती आम्र्स फोर्समा भर्ना भएका थिए। सायद यो नै नेपालको इतिहासमा पहिलो अभिलेखीकरण भएको माइगे्रसन हो। ४६५० बाट सुरु भएको कथा आज लाखांैको संख्यामा नेपाली युरोपदेखि विश्वभर फैलिएर आआफ्नो मेहनत, इमानदारी तथा क्षमताले विभिन्न देशमा सम्मानजनक जीवन बिताइरहनुभएको छ। त्यही बेलादेखि आफ्नो कमाइ नेपाल पठाएर देश विकासमा योगदान दिइरहनुभएको छ। यो प्रशंसनीय छ।
युरोपको विकसित वातावरण, विश्वको अब्बल शिक्षा, उच्चस्तरका भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयवस्तुबाट नेपालले सिक्न सक्ने धेरै विषय छन्। नेपालले सिक्ने र युरोपले सिकाउने सेतु युरोपमा रहेका गैरआवासीय नेपाली साथीहरू नै हुन्। लामो द्वन्द्व र द्वन्द्वमा लागेकाहरूलाई शान्तिपूर्ण तवरले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन हाम्रो अथक् र अनवरत प्रयास रह्यो। समाजमा जरा गाडेर बसेको अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट छुट्कारा पाउन गरिएका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई तीनै तहका निर्वाचनमार्फत धेरै हदसम्म रक्षा गर्ने आधार बनाएका छौं।
आजको हाम्रो आवश्यकता भर्खरै देशले अंगीकार गरेको संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नु र संविधानमा हामीले उल्लेख गरेका प्रावधानको पूर्ण पालना गर्नु–गराउनु नै हो। यो काम कम चुनौतीपूर्ण छैन र यसमा साथ र सहयोगका लागि म नेपालबाहिर रहेका गैरआवासीय नेपाली साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। देश लामो समयसम्म द्वन्द्व र आन्दोलनमा रह्यो। राणाशासन हटाउनेदेखि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरण गराउनेसम्म नेतृत्व गरेका हामी अब सरकारमा को छ भन्ने नहेरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा होमिने बेला भएको छ। यसका लागि कमजोर रहेका हाम्रा आधारभूत संरचनाको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र अपार सम्भावना बोकेको पर्यटन र जलस्रोतको विकास नै हो। यही एजेन्डामा बहस चलाउनुभएकोमा तपार्ईंहरूको देश प्रेमप्रति म खुसी भएको छु।
यदाकदा हामी डराएका छौं, कतै फेरि राजनीतिक रूपमा पछाडि त फर्कंदै छैनौं ? कतै मानव अधिकार, प्रेस स्वन्त्रत्रता र खुला अर्थतन्त्रको बाटो छाड्दै त छैनौं ?
गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले नेपालमा गरेको करिब एक सय अर्ब रुपैयाँको लगानीका लागि आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा म थप लगानीका लागि अनुरोधसमेत गर्छु। अबको आवश्यकता पूर्वाधार विकास नै हो। सडक र विद्युत्जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार नभई अरू जेजति भए पनि जनताले विकासको अनुभव गर्न सक्दैनन्। न त अन्य उद्योगधन्धा फस्टाउन नै सक्छ। तपाईंहरूको साथ र सहयोगमा ठूलो लगानी देशमा भित्रियोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। युरोपका ठूला लगानीकर्ता र नेपाली लगानीकर्ताका बीचको पुल बनेर ठूलो रकम नेपालमा लगानी गराउने माध्यम तपाईंहरू बन्नु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
साँच्चै नेपालको विकास गर्ने हो भने अहिले तत्काललाई नेपाललाई रेल र पानीजहाज होइन, नेपालभित्र ‘एक्सप्रेस वे’ चाहिएको छ। त्यो पनि एकदुईवटा होइन, पाँच—छ वटा। नेपालको तीव्र विकास अब ‘एक्सप्रेस वे’ बाट मात्रै सम्भव छ। राम्रो र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार नेपालको पहिलो तथा आधारभूत आवश्यकता हो। यो क्षेत्रमा तपाईंहरूको लगानी र सीप दुवै आवश्यक छ। आज हामी नेपालमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरूको लगानीमा बैंक, एअरलाइन्स, होटेल, विद्युत्, दूरसञ्चार आदि देखिरहेका छौं। यी क्षेत्रबाहेकमा पनि तपाईंहरूको लगानी आउनेमा म विश्वस्त छु।
पर्यटन हाम्रो मौलिक परिचय हो। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर र सगरमाथालगायत अनगिन्ती यस्तै गन्तव्य। नेपालका यी राष्ट्रिय धरोहरहरू हामी तीन करोड नेपालीको जीवनस्तर युरोपकै हाराहारीमा पुर्‍याउन पर्याप्त छन्। चाहिएको यी सबैको उचित व्यवस्थापन र विश्व पर्यटन बजारमा प्रचारप्रसार। यसका लागि तपाईंहरूभन्दा गतिलो र भरपर्दो दूत अरू को नै हुन सक्छ र ? तपाईंहरूले सुरु गर्नुभएको काठमाडौं एयरपोर्ट सफाइको कामदेखि विश्व पर्यटन बजारमा नेपाललाई चिनाउन विदेशमा रहेका हरेक नेपालीले कम्तीमा एकजना विदेशी नेपाल पठाउने ‘अतिथि देवो भव’ जस्ता कार्यक्रमको म मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै यसको निरन्तरताका लागि यसै मञ्चबाट अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छु।
सन् २०२० मा नेपालमा मनाउन लागिएको नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंहरूले विदेशमा धेरै कार्यक्रम गरी नेपालको उक्त कार्यक्रम सफल बनाउनु हुनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु। सन् २०१९ लाई तपाईंहरूले नेपाल प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउने भनेको सुन्दा पनि म खुसी छु।
तपाईंहरू यस्तो देशहरूमा हुनुहुन्छ, जहाँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर शासन गरिन्छ, उनीहरूको आवश्यकताको ध्यान दिइन्छ, पारदर्शिता र सुशासन छ, राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्छ र निष्ठामा आधारित राजनीतिक इमानदारी छ। राजनीतिक इमानदारी, पारदर्शिता र पूर्ण लोकतन्त्रविना कुनै प्रकारको विकासको अवधारणाले काम गर्दैन। यदाकदा हामी डराएका छौं, कतै फेरि राजनीतिक रूपमा पछाडि त फर्कंदै छैनौं ? कतै मानव अधिकार, प्रेस स्वन्त्रतता र खुला अर्थतन्त्रको बाटो छाड्दै त छैनौं ?
हामीले माथिका विश्व लोकतन्त्रका आधारका लागि आन्दोलन गर्ने दिन आयो भने आर्थिक रूपमा हामी कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैनांै। तसर्थ, विश्वका कुनाकुनामा रहनुभएका गैरआवासीय नेपाली साथीहरूलाई चनाखो हुँदै परेको बेलामा आफ्नो आवाज उठाइदिन आग्रह गर्छु।
—कोइरालाले गैरआवासीय नेपाली संघ युरोपियन क्षेत्रको बाह्रौं बैठकलाई इटालीको रोममा दिएको वक्तव्यको सम्पादित अंश।